တကိုယ်တော်လုပ်တဲ့ `ဦးပိုင် ဆန့်ကျင်ရေး Campaign´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » တကိုယ်တော်လုပ်တဲ့ `ဦးပိုင် ဆန့်ကျင်ရေး Campaign´
တကိုယ်တော်လုပ်တဲ့ `ဦးပိုင် ဆန့်ကျင်ရေး Campaign´
Posted by ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ on Dec 1, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Ideas & Plans | 17 comments
တကိုယ်တော် ဦးပိုင် ဆန့်ကျင်ရေး Campaign ဦးတို့ပိုင်တဲ့ ကမ်ပဏီ
မြန်မာ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်စုံမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြီးကို အင်အားကြီး ခြေကုပ်ယူမိထားတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဗျ..
ကျုပ် ဦးလေး စစ်သားကြီးတွေ ချွေးနဲစာတွေနဲ့ မတည်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ၊ ဦးတို့ ပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ဆိုပါတော့ဗျာ..
ကုမ္ပဏီကြီးက ရတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကို ဟိုလူကြီးမင်းသွားမယ့်လမ်းတိုင်းမှာ လုံခြုံရေးကင်းစောင့်ပေးရရှာတဲ့ ကျုပ်ဦးလေးတွေ ဘယ်လိုခံစားရတယ်တော့မသိ..
ဟိုးထိပ်စည်းက အကောင်ကြီးကြီးတွေကတော့ အခွင့်အရေးဟူသမျှ သူရို့လက်ထဲဆိုတော့ ပြောရမှာတောင် မကောင်းပါဘူး..
အကောင်ကြီးတွေ သားသမီး ကလပ်မှာ တခါသုံးဟာ လုံခြုံရေးယူနေတဲ့ ကျုပ်ဦးလေး လစာရဲ့ ဆယ်ဆတောင် က ပါ့မလားရယ်.
(ဘုန်းဖုရားကြီးသူများတော့ နား သွားတာတောင် နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက် ထဲက နှိုက်သုံးနေတုန်း.. မရှိတဲ့ သူတွေ ကျလို့)
ပြောရရင် ကျုပ်ဦးလေးတို့ပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးက နိုင်ငံစီးပွားရေးမှာ ကင်ဆာအမြစ်တွယ်ပြီး အသွေးအသား စုပ်သလို ကုပ်တွယ်နေတော့ကာ ဆေးတောင်မီပါဦးမလား ပူမိတယ်ဗျာ..
နာမည်နဲ့လိုက်အောင်လည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နယ်ပယ် ဂွင်မှန်သမျှမှာ ဒီကုမ္ပဏီကြီးက ဦးပြီး ပိုင်ပြီးသားခင်ဗျ..
အဲ့ဒီ ဦးထားပိုင်ထားတာလည်း ဘယ်လို ဘယ်နည်းရထားတယ်ဆိုတာ ထင်သာမြင်သာခဲ့တာ ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မတုန်း
အသံထွက်တော့မှသာ သူပါမှန်းသိရတာတွေ အများကြီး..
ခု လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကိစ္စမှာပဲကြည့်၊ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီပေးခြေရမယ့် ငွေစာရင်း တရုတ်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုက သွင်းသွားတယ်ဆိုမှ အများသိရတာ..။
အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရတဲ့ နယ်သူနယ်သားတွေ မကျေမနပ်ဖြစ်ကြတော့ အားလုံးက ခြေလွန်လက်လွန်တွေ ဖြစ်နေပြီ။
ဒီကိစ္စပြောရတာလည်း နှမ လင်နေတော့ မောင် ဖင်ကျိန်း တဲ့ ကိန်းမျိုးဗျ။
မိဘ ဆိုတဲ့ လူကြီးတွေက ကောင်းပါတယ်လို့ နည်းနဲ့ လမ်းနဲ့ သားမှတ်မှတ် မယားမှတ်မှတ် ပေါင်းမယ့်သူနဲ့ ပေးစားထားတယ် ဆိုပေသကိုး။ (တန်စိုးလက်ဖွဲ့တွေ ယူ၊ ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ တင်တောင်းတယ်ဆိုတာ နောက်ကွယ်ကလေ)
ကိုယ့်နှမကို ဟဝါပြုလေမှ အနောက်ခန်းထဲက အမေကယ်ပါ၊ အဘကယ်ပါ အော်သံကြားတော့ ထဆဲလို့ မရတဲ့ အစ်ကိုမောင်တွေ အဖြစ်မျိုးလေ။
နှမလေးက ဒီလူနဲ့ မပေါင်းနိုင်ပါဘူးတော်ရေ့ဆိုလို့ကော ကိစ္စက ပြီးသွားမလား။
ဟိုက စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ အတည်ယူတာတို့၊ ခင်ဗျားလွန်တယ်တို့၊ ဂျယ်လေးသုံးပြီး အနာသက်သာအောင်လုပ်ဖို့အရေးဆိုပေါ့တို့ ပြောကြမှာပေါ့။
မိဘနေရာက လူကြီးတွေ လုပ်ပုံလည်းကြည့်အုံး..။ ကောင်းစေချင်လို့ လင်ပေးစားတာ.. နာတယ်ဆိုပြီး ပြောတဲ့ သမီးကို ကျည်ပွေ့နဲ့ ထုတဲ့အတိုင်းပဲ။
ဟိုမှာ သူတို့ကို လက်ညှိုးနဲ့တောင် ပြန်မထိုးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေသူ သံဃာနဲ့ နယ်သူနယ်သားတွေကို မျက်ရည်ယိုပြီးလူစုကွဲအောင်လုပ်တာတဲ့။
တကိုယ်လုံးမီးလောင်တာ ရစရာကောရှိလို့လား..။ ကိုယ့်အသား အဲ့လိုနာရင်ကော ခံနိုင်ကြမတဲ့လား စဉ်းစားပါအုံး။
ဘုန်းကြီး ခေါင်းခေါက်တာတောင်မဟုတ်၊ မီးလောင်တိုက်သွင်းပြီးမှ ဆောရီးလုပ်ချင်သေးတယ်။ ( တရုတ်အားကိုး မA၇ိုးတွေလို့ မပြောတော့ပါဘူးဗျာ)
သံဃာတော်တွေကတော့ သူတို့တတ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ တုန့်ပြန်လိုက်ပြီလေ။ သူတို့ကပ်တဲ့ ဆွမ်းကို လက်မခံခဲ့ဘူး။ (သံဃာ အလုပ်ပဲ လုပ်ပါလို့ ပြောကြတယ်မလား)
ခု သမဒကြီးကလည်း ကော်မရှင်ဖွဲ့ စစ်ခိုင်းပြီတဲ့။
ဘာရမတုန်းဗျာ။ ကျုပ်လည်း လက်ပံတောင်းတောင်အထိ သွားမကူနိုင်ပေမယ့် ကျုပ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က လှုပ်ရှားမယ်။
ဒီကနေ့ကစ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီနဲ့ ပတ်သက်သမျှ ဘာမှ အားမပေးတော့ဘူး..
ဘယ်သူမှ ကိုယ့်ဘက် မပါချင်နေ တကိုယ်တော် `ဦးပိုင် ဆန့်ကျင်ရေး Campaign´ လုပ်မယ်.. လာလေရော့..။
ဦးတို့ပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ လွတ်တဲ့ကိစ္စကလည်း မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ခပ်ရှားရှားရယ်..။ မြေပေါ် မြေအောက် ရေပေါ် ရေအောက် ဟိုး ချောင်ကြိုချောင်ကြားတောင် မလွတ်ဘူးဗျ။
ရတယ်။ ကိုယ်စားတဲ့ဆန် သူနဲ့လွတ်အောင် ကျုပ်အဖိုးလယ်ထွက် ပဲ စားတော့မယ်။ ကျုပ်အဖိုးက နောက်ချေးဘဲ မြေသြဇာလုပ်တာဆိုတော့ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကရောင်းတဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာနဲ့လည်းလွတ်ပြီးသား။
ကြက်ဥနဲ့ ကြက်သားအတွက်လည်း ယောက်ဖကြက်သမားဆီက အားပေးမယ်။ ဗမာကြက်ဆိုတော့ ဟင်းတောင် လေးလေးပင်ပင်ရှိသေး.. ဟေ ဟေး။
အသီးအရွက်လည်း ကိုယ့်ဖာသာ ခြံစိုက်စားပစ်မယ် ဘာမှတ်လဲ။
အဝတ်အစားလည်း အမေ့ လက်ယက်ကန်းစင်ကကျတဲ့ ချည်ထည်လေးတွေပဲ ဝတ်မယ်ဗျာ။ ပင်နီလေးနဲ့ဆို ကိုယ်ရောင် ပိုလင်းသလားလို့။
နီးနီးနားနား ဘတ်စ်ကားတို့၊ အဝေးခရီး ရန်ကုန်.. မန်းလေး သွားလည်း ဦးပိုင်ဆွဲတဲ့ ကားနဲ့ တိုးမှာစိုးလို့ ဘာမှ မစီးတော့ဘူး။ ဈေးတွေ ကျနေတာဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်ကား ဝယ်လိုက်တော့မယ်။
ကျုပ် သိပ်ကြိုက်တဲ့ ဘီအီး၊ ဘီယာတို့အတွက်ရော..။ မပူဘူးဗျို့။ ကျုပ်က နှံ့စပ်ပြီးသား..။ ဂေဇက်မှာ အရက်ချက်တဲ့ပို့စ် ဖတ်ရတုန်းက ကော်ပီလုပ်ပြီး သိမ်းထားတာ. ဟဲ ဟဲ ဟဲ။
ကဲ ဘယ်သူ ဘာပြောပြော ကျုပ်ကတော့ တကိုယ်တော် `ဦးပိုင် ဆန့်ကျင်ရေး Campaign´ စပြီပဲ။
+++ xxx +++ xxx
“ကျုပ်လား ဘယ်မှ မပြေးပေါင်ဗျာ..။ ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စားပြီး ကိုယ့်ဝဲ ကိုယ်ကုတ်နေတာ.. အေးဆေးပဲ”
“အေးဆေးလုပ်မနေနဲ့.. လာ စခန်းလိုက်ခဲ့”
“ဘာဗျ ကျုပ်က ဘာလို့ စခန်းလိုက်ရမှာတုန်း၊ နေပါအုံး ခင်ဗျားတို့ ဘယ်သူတွေတုန်း”
“ယစ်မျိုးနဲ့ ကျုပ်နဲ့ ဘာဆိုင်လို့..”
“ခင်ဗျား အရက်ပုန်းချက်နေတာ သတင်းအတိအကျရပြီးသား ဘာငြင်းချင်သေးလဲ!”
“အဲ အဲဒါ ကျုပ်ဖာသာ သောက် သောက်ဖို့..”
“ဒါတွေလာမပြောနဲ့။ ကျုပ်တို့က ဥပဒေအရ လုပ်တာ။ ကျန်တာ စခန်းရောက်မှ ရှင်း“
“ဗျာ.. ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့”
ပုန်းချက် ပုန်းရောင်းမလုပ်နဲ့ (credit: ဆရာဟာဂျူလီ-ကသာ)
စစ်အာဏာရှင် စနစ်သိုးကြီးရဲ့ ဆိုးမွေ = ဦးပိုင် ကင်ဆာရောဂါကို အမြစ်ပြုတ်နှံမယ်လေ
ဆိုးမွေ (Credit to: ကာတွန်း ဆရာစိုးစံဝင်း နှင့် The Yangon Times)
credit: http://freedomnewsgroup.com/2012/11/30/myanmar-holdings/ (မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်၏ လုပ်ငန်းများ)
တကိုယ်တော် အူးပိုင် ဆိုန့်ကျင်ရေး တဲ့ကောင်းပါပေစွဗျာ . . . . .
အဲ့ဒီလို တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ /ဖြစ်စေတဲ့
အဖွဲ့အစည်းတွေ လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းသူပြည်သား အားလုံးက
ဒီကောင်တွေ နဲ့ပတ်သတ်တာတွေကိုအားမပေးဘူး ဒီကောင်တွေ ရဲ့အလုပ်မှာ လစာဘယ်လောက်ရရ
၀င်မလုပ်ဘူး ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ သူတို့နဲ့ မပူးပေါင်းဘူး ဆိုရင်ဖြင့် ဒီကောင်တွေ
ရေရည်မှာ ရပ်တည်နိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
တရုတ်တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့လဲ ဒီလိုပဲဖြင်ချင်တယ်
တရုတ်တွေ ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်ဆိုရင်အားမပေးဘူး တရုတ်တွေရဲ့ အလုပ်တွေမှာ ၀င်မလုပ်ဘူး
ဒါမျိုးသာ အားလုံးက တစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲ ၀ိုင်းဝန်း ဆန့်ကျင်ကြမည်ဆိုရင် ကြာလာတဲ့အခါ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ တရုတ်ဆိုရင် အပျင်းပြေ ပါးပိတ်ရိုတ်စရာ တောင်တစ်ကောင်မှ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး
အားပေးတယ်ဗျို့ . . . . . .
အဲဒီလို လုပ်နိုင်မယ်ဆို ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ
ဒါပေမယ့် ပြောခဲ့ပါသကော.. ကင်ဆာ အမြစ်တွေလို မြန်မာ့စီးပွားရေးမှာ ကုပ်တွယ်နေပါပြီလို့
လက်ကားလည်းကြီးပါတယ်.. နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်း အစုံမှာ ဦးပိုင်နဲ့ မလွတ်ပါဘူး..
ဦးပိုင်နဲ့ တရုတ်ကို ဆန့်ကျင်မယ်ဆိုရင် ပြည်တစ်ဝက်လောက် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်သွားမလား မဆိုနိုင်ဘူး
လုပ်သင့်တာကတော့ Regulation= စည်းကြပ်မှုအပိုင်းကို ပိုဖိဖိစီးစီး ကိုင်ရမှာ..
သူတို့ ချုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်တွေ နည်းလမ်းမှန်လား၊ လုပ်ငန်းတွေ ဥပဒေအတိုင်းဟုတ်ရဲ့လား စစ်ရမယ်
နောက်လာမယ့် ကိစ္စတိုင်းလည်း အစကတည်းက ထင်သာမြင်သာ လုပ်ကြဖို့ပါ..
တကယ့် ဆိုးမွေဗျ ဆိုးမွေ..
အဘ ဖါတ်မိသလောက်တော့ ။
၁ ။ ဒီ စီမံကိန်းဟာ အိုင်ဗင်ဟို နှင့် အစိုးရ သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီး ဋ္ဌာန ပူးပေါင်း စီမံကိန်းပါ ။
အဲဒီအတွက် EIA ၊ SIA အားလုံး အိုင်ဗင်ဟို ကလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
အိုင်ဗင်ဟို ရှုံးတယ် ၊ ဆက်မလုပ်နိုင်ဘူး ။ သူ့ ရှယ်ယာ ကို ရောင်းတယ် ။
၂ ။ ထုံးစံအတိုင်း သတင်း အဆက်အသွယ်ကောင်းတဲ့ ဦးပိုင် ဝင်လာတယ် ။
စာချုပ်ထဲမှာတော့ အိုင်ဗင်ဟို ရှယ်ယာ ကို ဦးပိုင် က ဝယ်တယ် ။
တကယ့်တကယ် ပိုက်ဆံချေရတော့ ဝမ်ပေါင်ကပဲ အပြည့် ချေရတယ် ။
၃ ။ အကျိုး အမြတ်ကျတော့
ငွေ အရင်းအနှီး ပြန်နှုတ်ဖို့ နှင့် လုပ်ငန်း စရိတ် က ၅၅ % ( ဘာမှ ပြောစရာ မရှိ )
အစိုးရ ( သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီး ဋ္ဌာန ) က ၁၅ % ( ထားပါ သူက အစိုးရ မို့လို့ )
ဝမ်ပေါင်က ၁၅ % ( သူက ငွေ အား ၊ လူ အား ၊ နည်းပညာအား ရင်းရတယ် )
ဦးပိုင်က ၁၅ % ယူတယ် ( ဘာမှ တော့ ရင်းတာ မတွေ့ဘူး ) ။
အဘတော့ အဲလိုပဲ နားလည်ထားတယ် ။
ဒီ စီမံကိန်းမှာ ဘယ်သူမှားလဲ ကတော့ ရွာသူားတွေပဲ စဉ်းစားကြပေါ့ ။
Wiki Leak က သတင်းတွေ အရ ၊
ဝမ်ပေါင်က ပေးရတဲ့ ငွေက ၊
အိုင်ဗင်ဟို ကုမ္ပဏီကို US$ သန်း ၂၅၀ ။
သတ္တုတွင်း ကို ပြန်မွမ်းမံ ရတာက US$ သန်း ၁၀၀ ။
ဦး တေဇ ကို ပွဲခ ( ပွဲခ ) ပေးရတာက US$ သန်း ၅၀ ။
” using regime crony Tay Za asabroker. Ford told us
the Chinese agreed to pay USD 250 million for the mine and
equipment, USD 50 million to Tay Za in consulting fees, and
an additional USD 100 million to upgrade the mine. ”
အင်း ၊ ဦး တေဇ လဲပါတယ်ဆိုတော့ ၊ စာဖတ်နေ သူကြီး လဲ ပါပုံရတယ် ။
ဒီ ကိစ္စက ကြီးပုံရတယ် ။ မထိတာ ကောင်းမယ်ထင်တယ် ။
ခုထိ လျက်တဲ့လူ လျက်နေတုန်းပဲလား
အကယ်၍ အမေစုတို့ ကော်မရှင်က စစ်လို့ ၊
လယ်သမားတွေ ကိုလျော်ကြေး ထပ်ပေးရမယ်ဆိုရင် ၊
ဝမ်ပေါင် ကို လျော်ခိုင်းမနေနှင့် ၊
နင်တို့ ဦးပိုင် နှင့် ဦးတေဇ ပေါင်းလျော်ကြ ၊
တော်တော် မတရားတဲ့ သူတွေ ။
ဦးပိုင် က ဘာမှ မရင်းပဲ ၁၅ % အမြတ် ယူတယ် ။
ဦးတေဇ က လေ ရင်းပြီး US$ သန်း ၅၀ ယူတယ် ။
ပွဲခ ယူတဲ့သူက US$ သန်း ၅၀ ။
အကျိုးအမြတ်ကို ဦးပိုင်က ၁၅ % ယူတယ် ( ဘာမှ တော့ ရင်းတာ မတွေ့ဘူး ) ။
သြော် တရားကျဖို့ ကောင်းလိုက်တာ
ဖယ်ပေးရလို့ နစ်နာသူတွေကျ ပြေလည်အောင် ညှိမပေးနိုင်ကြဖူး..
သောက်ရေ၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ဒုက္ခတွေ ပြေလည်အောင် ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်..
အလုပ်အကိုင် နဂိုထက် မနိမ့်ကျအောင် လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာတွေနဲ့ ဆွယ်စမ်းပါ..
ကိုယ့်အတွက် နိုင်ငံအတွက် အကျိုးတကယ်ရှိတာကို ဘယ်သူက ငြင်းနိုင်မှာလည်းဗျာ..
စာဖတ်နေ သူကြီး လဲ ပါတာနဲ့ ဒီ ကိစ္စက ကြီးပုံရတယ် ဆိုပြီး မထိဘဲနေရမယ်တော့ မလုပ်နဲ့လေ..
ဥပဒေ ဆိုပေမယ့် တရားတဲ့ ဥပဒေတော့ ဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာ
ဒါဆို နာတို့ ဂေဇက်က တစ်ချို့တစ်ချို့သော လူတွေကရော
တကယ် တရားမျှတပြီး တိုင်းပြည်လဲအကျိုးရှိစေချင်ရင်
ဦးပိုင်ကို စစ်တပ်ရဲ့ရံပုံငွေ လုပ်ငန်းအဖြစ် ဆက်ထား..
ဦးပိုင်ကို စဖွဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီး စာရင်းစစ်..
မူလအရင်းထည့်ထားတာက စစ်သားတွေရဲ့ ချွေးနဲစာမှန်ပေမယ့်
အဲဒီအပေါ်မှာ မြတ်လာတဲ့ အမြတ်တွေက တရားသဖြင့် ရထားတာမဟုတ်လို့
အဲဒီအမြတ်တွေအပေါ်မှာ ဥပဒေအတိုင်း ဒဏ်ရိုက်၊ သိမ်းယူ၊ နောက်ကြောင်းပြန်အခွန်ကောက်
ပြီးတော့ ဦးပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ ဦးပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို တွဲပြီး မှီပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာထားတဲ့ကိစ္စတွေကို
တစ်ခုချင်းဖေါ်ထုတ်၊ လျှော်ခိုင်း၊ ဒဏ်ရိုက်၊ အခွန်ကောက်၊ နိုင်ငံပိုင်သိမ်း၊ ထောင်ချ…
ချောက်ထဲကျဖို့လက်နှစ်လုံးအလိုဆိုပြီး နောက်တကြိမ် အကယ်ခံနေရဦးမယ်…
လျော်ကြေးဆိုတာ မရှိ ဆိုပါလား.. ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တွေ့လိုက်တာလေး
နိုင်ငံတော် အဆင့် ဘယ်စာချုပ်မှာမှ လျော်ကြေးဆိုတာမပါပါ၊ Government to Government (G to G), Government to Private/ Public (G to P) နု
စ်မျိုးရှိရာမုာ၊ G to G project ကန
ဲပါတယ်၊ G to G မှာလဲ လျော်ကြေးဆိုတာမပါပါ၊
၀ံသာနုပရိသတ်တွေ ဗဟုသုတရစေဖို့ ပညာရှင်တွေရဲ့ အမြင်တွေကို ထပ်ဆင့်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
Wanna More Pixie Lay: ဝေဖန်တာကျေးဇူးပါ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ Investment Project Agreement ချုပ်ဆိုတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီးပြောရရင်၊ နိုင်ငံတော် အဆင့် ဘယ်စာချုပ်မှာမှ လျော်ကြေးဆိုတာမပါပါ၊ Government to Government (G to G), Governme
nt to Private/ Public (G to P) နုစ်မျိုးရှိရာမုာ၊ G to G project ကန
ဲပါတယ်၊ G to G မှာလဲ လျော်ကြေးဆိုတာမပါပါ၊ တရုတ်နဲ့က G to P တွေများပါတယ်၊ G to P မှာဘာပါလည်းဆိုတော့ Sovereign Guarantee ခေါ်တဲ့ Project ကို ပြည်သူပိုင် မသိမ်းပါဘူးဆိုတဲ့ အာမခံချက်နဲ့၊ ပြည်သူပိုင် သိမ်းခဲ့ရင် နစ်နာကြေး ပြန်ဖော်နိုင်အောင် ဗဟိုဘဏ်က State Bank Guarantee ထုတ်ပေးပါတယ်၊ တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ State Bank Guarantee က တန်ဘိုးအရှိဆုံး Guarantee တွေဖြစ်ပေမဲ့၊ Defacto အစိုးရ အုပ်ချုပ်ပြီး Sanction အောက်က Myanmar ရဲ့ Sovereign Guarantee နဲ့ State Bank Guarantee က ကမ္တာ့စာချုပ်စာတမ်းဈေးကွက်မှာ ငါးပြားမှမတန်ပါဘူး၊ နောက်ပြီးစာချုပ်တိုင်းမှာ Force Majeure ဆိုတာပါပါတယ်၊ Project လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာ စစ်ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ “ဆန္န ပြပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်”၊ သဘာဝဘေးကျရောက်ခဲ့ရင်၊
အစိုးရ (သို့) Investor က Notice ပေးပြီး တဘက်သတ်ရပ်လို့ရပါတယ်၊ ဘာလျော်ကြေးမှပေးစရာမလိုဘူး၊ ဒါကြောင့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက မြစ်ဆုံကို ဖျက်သိမ်း (ပြည်သူပိုင်သိမ်း) တယ် မပြောဘဲ ရပ်ဆိုင်းတယ်လို့ပြောတာပါ၊ Force Majeure ကိုသုံးတာပါ၊ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ရွှေ့ကွက်ပါ၊ ဒါကြောင့်တရုပ်တွေ ဘာမှလုပ်မရဘဲ ဟိုအော် ဒီအော် နဲ့ ပြန်ညှိမယ်လုပ်နေတာပါ၊ ဒီဥပမာကို ကြည့်ရင်၊ အစိုးရက Force Majeure သုံးပြီး Investor ကိုပြန်ညှိ ခိုင်းလို့ရကြောင်း ထင်ရှားပါတယ်၊ ကြေးနီတောင် ကိစ္စမှာ ကော်မရှင်ဖွဲ့တာ ပထမခြေလှမ်းပါ၊ မြစ်ဆုံတုံးက Without Notice လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် နောက်တခု ထပ်လုပ်ရင်မကောင်းတတ်လို့၊ ဆန္န ပြပွဲ နဲ့ ကော်မရှင်ကို ခေါင်းစဉ်တပ်၊ ဆင်ခြေဆင်လက် ပေးပြီး တရုတ်နဲ့ညှိ ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်၊ မယုံရင်ကြည့်ပါ တရုတ်က ပြန်ညှိ လာပါလိမ့်မယ်၊ Investor ဆိုတာ လျော်ကြေး လိုချင်တာမဟုတ်ပါ၊ စီးပွားရေးလုပ်ချင်လို့ အကျိုးအမြတ် များများရချင်လို့လာလုပ်တာပါ၊ ကြေးနီတောင် Investment Project Agreement ကို လူထုကြားချပြပြီး နားလည်သူများက တဖက်စောင်းနင်း ဖြစ်နေတဲ့ အချက်တွေပြင်၊ နှစ်ဘက်မျှတ အောင် ပြန်ရေး၊ ဒေသခံတွေ အတွက်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အတွက် အချက်တွေ ဖြည့်စွက် လိုက်ရင်၊ တရုတ် ငြင်းလို့မရပါဘူး၊ သူငြင်းရင် သူက စာချုပ်ဖောက်ဖျက်သူဖြစ်သွား ပါမယ်၊ အဲ စာချုပ်မှာ အဘ တို့အတွက် ပွဲခတွေ၊ ဆွေ ၇နှစ်ဆက် ပေးရမယ့်ကော်မရှင်တွေပါလို့ ချမပြရဲရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး ဗျာ။
Wanna More ဥပမာပေးရရင် တောင်အမေရိက ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတ Hugo Chavez က American ကိုကြည့်မရတော့ American ရေနံကုမ္မဏီတွေ နဲ့ နိုင်ငံတော် အဆင့် စာချုပ်ထားတဲ့လုပ်ကွက်တွေ အားလုံးကို ဘလိုင်းကြီး ပြည်သူပိုင်သိမ်းပြီး မောင်းထုတ်၊ ငါးပြားမှ နစ်နာကြေးမပေးနိုင်ဘူးကွာ ဆိုပြီး ထုတ်ပေးထားတဲ့ Guarantee တွေအားလုံး Cancel လုပ် လိုက်တာ American တွေ ကက်ကက်လန်အောင် အော်ယုံ ပဲတတ်နိုင်တယ် ဘာမှ လုပ်လို့မရ၊ တကမ္တာလုံးက တရားရုံးတွေမှာ တရား ပတ်စွဲလဲ ဒီနေ့ထိ ငါးပြားမှ မရသေးပါ၊ သူကတော့ လူဆိုးပေါ့ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ Sovereign State ဆိုတာ လုပ်ချင်ရင် လုပ်လို့ရကြောင်း ပြောတာပါ၊ နောက်တော့ ကျွန်တ်ာတို့ဇာတ်လိုက် တရုတ်က ဗင်နီဇွဲလား ကိုပြေးပြီး လုပ်ကွက်တွေ အားလုံးကို Take Over လုပ်လိုက်တာပါ၊
credit- Rango Black
တကယ် ဟုတ်လို့ကတော့ကွာ ဟင်း ဟင်း
အပေါ်က ပို့ စ်ကို ဖတ်တော့ ရယ်ရတယ်
နောက် ကွန်မင့်တွေ ဆက်ဖတ်တော့
အလို သည်ကွန်မင့် ကို ဖတ်ရတာ အားရှိလိုက်တာ ရွာစားရယ်
အဲ့တိုင်းသာ ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ ကတော့လေ
ရွှေလီ(၁)ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ လျှပ်စစ်စက်ရုံ အသေးစိတ် အစီရင်ခံစာဆိုတာ ဖတ်ဖူးတယ်မလား
တရုတ်နဲ့ဆောက်တဲ့ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တစ်နှစ်လောက်ရှိတော့ အကြီးစားပြင်လိုက်ရတာလေ
သူတို့ လုပ်ပေးတဲ့ ဟာတွေ မှန်သမျှရော ဘယ်နှစ်နှစ် သုံးရမယ်။ ဘာအာမခံပါသလဲ၊ ပျက်သွားရင် ဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာ ပါရဲ့လား..
..လင့်ခ်လေး ထည့်ပေးလိုက်တယ် မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်
မင်းနန္ဓာ ရဲ့ ။
အဂတိ လိုက်စားရင် ၊ ညံ့ရင်တော့ ၊
ဘယ်နိုင်ငံ ကဖြစ်ဖြစ် ဂျင်းထည့်တာပါပဲ ။
အဘ သိသလောက် ၊
ကမ္ဘာ့ စက်မှု အင်အားကြီး ဂျာမဏီ နိုင်ငံက အစ ၊
မြန်မာပြည်ကို ဂျင်းထည့်ခဲ့တာပါပဲ ။
( ဒီပေါ်မှာတော့ ပြောလို့ မကောင်းဘူး ၊
ရန်ကုန်မှာ တွေ့ရင်တော့ ပြောပြမယ် )
ညံ့ရင်တော့ ခံရမှာပဲ ။
တရုတ်မှ မဟုတ်ဘူး ကြုံတဲ့နိုင်ငံ မှန်သမျှက ၊
တစွတ်စွတ် ထည့်သွားကြမှာပဲ ။
ရှေ့လျှောက် နှစ် နှစ်ဆယ်လောက်ကတော့ ၊
ခံဖို့သာ ပြင်ထားကြ ။
ဘယ့်နှယ် လျော်ကြေးဆိုတာ မရှိ ရမှာလဲ ။
အဲဒီ ထဲမှာရေးထားတဲ့ ” Sovereign Guarantee နဲ့ State Bank Guarantee ” ဆိုတာ ၊
မမှန်မကန်လုပ်ရင် ပေးလျှော်ပါ့မယ် လို့ ပြောထား Guarantee ပေးထားရတာ ။
အဲဒါကို ” ငါးပြားမှမတန်ပါဘူး ” ဆိုပြီး မလိုက်နာပဲ နေကြည့်ပါလား ။
မြန်မာပြည်ရဲ့ Credit Rating စသဖြင့် အကုန်ထိုးကျသွားမယ် ။
မြန်မာပြည် ဟာ Default State ဆိုလား ၊ မယုံကြည်ရတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်သွားမယ် ။
အဲဒီမှာ ဘာဖြစ်လာမလဲ ဆိုတော့ ၊
မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်လုပ်ရင် Insurance က Cover မပေးတာ ဖြစ်လာမယ် ။
Insurance က Cover မပေးလို့ကတော့ ၊
မြန်မာပြည် ကို ဘယ် ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီမှ လာလို့ကို မရတော့ဘူး ။
အမေစုတို့ သိတာပေါ့ ၊ အမေစု ဆီမှာလဲ ပညာတတ် အကြံပေး အဖွဲ့ ရှိတာပဲ ။
ဒါကြောင့် အမေစု ကိုယ်တိုင်က စာချုပ်တွေ လိုက်နာရမယ်လို့ ပြောနေတာ ။
နောက်ပြီးတော့ ” စာချုပ်တိုင်းမှာ Force Majeure ဆိုတာပါပါတယ် ” ဆိုတဲ့ ကိစ္စ ၊
အဘ တို့ Marine Trading နှင့် Insurance တွေမှာလဲ အဲဒီဟာတွေ ပါပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ ဘယ်စာချုပ်မှာမဆို ၊
စာချုပ်ထဲမှာ ထည့် / တွဲ ထားတဲ့ Clause က Over-rule အာဏာပိုကြီးပါတယ် ။
ဥပမာ အဘ တို့ BL မှာဆိုရင် Peril ( သဘာဝ ဘေးဒါဏ် ) ဖြစ်ရင် မလျော်ဘူး ၊ ပုံမှန်ပဲ ။
ဒါပေမယ့် Peril ( သဘာဝ ဘေးဒါဏ် ) ဖြစ်ရင်လဲ လျော်ပါ့မယ် ဆိုပြီး Clause ထပ်ထည့်လိုက်ရင် ၊
Peril ( သဘာဝ ဘေးဒါဏ် ) ဖြစ်ရင်လဲ လျော်ရတော့မှာပဲ ။
ဆိုလိုတာက ၊ မူရင်းစာချုပ်ကို မမြင်ရပဲ နှင့် ဘာမှ ပြောလို့ မရပါဘူး ။
လောလောဆယ်တော့ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း က ၊
မြစ်ဆုံ မဖြစ်ရင် ၊ ၃ ဘီလျှံ လျော်ရမယ် လို့ ပြောသွားတာပဲ ။
သူက အရူးမှ မဟုတ်တာ ၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ပဲ ၊ သူ သိရ လို့ပြောသွားတယ်ပဲ မှတ်ပါ ။
အေးဗျာ.. ဘိုးFRကြီး ပြောသလိုဆိုတော့လည်း နိုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာအရ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့..
တရုတ်ကကုမ္ပဏီတွေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်လုပ်တဲ့ စီမံကိန်းတွေမှာ ကြိုတင် ခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း မဖြစ်ရင်၊ ရွှေလီ(၁)လို နှစ်မတိုင်ခင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် ဘယ်၍ဘယ်မျှ လျော်ရမယ် ဆိုတာမျိုး စာချုပ်ထဲ ထည့်မချုပ်ရလောက်အောင် ချိုကုပ်ဒူးကြီးတွေ ဝန်ချီးတွေ မအလောက် ပါဘူးနော်..
တကယ်လို့ အဲလိုဟာမျိုး မပါဘူး ဆိုရင်တော့ မောင်အောင်မင်းပြောတဲ့ တရုတ်ကြီးရဲ့ ကျေးဇူးဆိုတာ ဟိုကာတွန်းလေးထဲကလို..
ကျွန်တော်တို့ ပွဲလန့်တုန်းက သူပဲ ဖျာ ဝင်ခင်းပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးလို့ ဆိုရမလားဗျာ
မှန်တာပြောရရင် တရုတ်ပစ္စည်းများ ၊
ဘယ်သူမှ မကြိုက်ပါဘူး ။
စစ်တပ်ထဲက လူတွေကိုယ်နှိုက်ကလည်း ၊
တရုတ်ပစ္စည်း မကြိုက်ပါဘူး ။
တရုတ် စက် ၊ တရက် စုတ် လို့ကို ပြောနေတာပဲ ။
ခက်တာက ကိုယ်တွေ သုံးနိုင်တဲ့ ငွေပမာဏ က ၊
ဒီလို တရုတ်ပစ္စည်း လောက်ပဲ ရတာကိုးကွယ့် ။
ဥပမာ ဝေးဝေး မကြည့်နှင် ၊
ဒီနှစ်ထဲတင် MPT က မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ 3G ပြောင်းဖို့ တင်ဒါခေါ်တယ်လေ ။
လျှောက်တဲ့ အထဲမှာ ဥရောပ ကုမ္ပဏီတွေလည်း ပါတာပဲဟာ ။
တင်ဒါမှာ ဥရောပ ကုမ္ပဏီတွေ တောင်းတဲ့ဈေးက အရမ်းမြင့်တော့ ၊
နောက်ဆုံး ၊ ရတော့ တရုတ် ကုမ္ပဏီ ( ၃ ) ခုပဲ ရသွားတာလေ ။
အဓိက က ကိုယ်တွေက မွဲတာကိုး ။
ချမ်းသာအောင် အရင်လုပ်ကြပါအုန်းကွယ် ။
လက်ရှိမွဲးနေတဲ့ ဘ၀လေးက လွတ်အောင်ဆိုပြီး ဂျနော် ရဲ့ ကြိုးစားမှု့လေးတွေပါ . . . . . .
ပထမဆုံး သိန်းထောင် ဂဏန်းရအောင်ဆိုပြီး ထီထိုးတယ် မပေါက်ဘူး ။ နောက်ထပ်
သိန်းရာဂဏန်းလောက် ရရင်လဲ မဆိုးပါဘူးဆိုပြီ ချဲထိုးတယ် ထိုနည်း၎င်း ။ ပြီးတော့
ဆယ်ဂဏန်းလောက်ရလဲ ဆိုပါဘူးဆိုပြီး နှစ်လုံးထီထိုးတော့လဲ ပေါက်ဘူး ဒါနဲ့
နှစ်သိန်း သုံးသိန်း ရနည်းလားဆိုပြီး ဘောလုံးပွဲးလောင်း တယ်ရှုံးတာပါပဲခညာ အဲဒီလိုနဲ့ မွဲးနေတဲ့ ကျုပ်ကို
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနှစ်အရ ဘာများ အထောက်အပန့် ရမလဲသိချင်လို့ပါ . . . . . .